'Porn on your Brain' - အဖေ၏ Network Scotland (စာအုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း) - Porn ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများ - Nick THORPE အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ပါသညျနိုင်ဖျက်ဆီး၏ထွန်းသစ်စသက်သေအထောက်အထားကို examine ။
ကျနော်တို့ porn ဖို့ဘယျအရာသဘောထားကိုရှိသင့် - မရမယ့်အရွယ်ရောက်သူအဖြစ်, ဒါပေမယ့်မိဘများအဖြစ်?
၏ပါတီအားအတွက် ဘေးကင်းအင်တာနက်ကိုနေ့ 2015 မနိမ့်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်, ကောင်းတစ်ဦးဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပုံရသည် သုတေသနပြပွဲ ထိုသို့သူတို့ကိုရှာတွေ့ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှရဲ့ - အရှိဆုံးယောက်ျားလေးများသူတို့အများဆုံးလိင်စပ်စုနေအခါ, 10 များ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံရိပ်တွေကိုရှာသော။
Google ကသို့ "အဝတ်အချည်းစည်း" စာရိုက်ကြိုးစားပါ, သင်သာတစ်ဦးအနေနဲ့မရှိသောဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူကလေးတွေအဘို့အပယ်သွား mouse ကို-click ရဲ့ပစ္စည်းမျိုးတစ်ခု eyeful ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အရေးပါသလား? အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဆိုင်ကယ်နောက်ကွယ်မှန်းကျင်ရှောက်သွားသောအခါ tatty မဂ္ဂဇင်းကနေဒါကွဲပြားခြားနားသောလွန်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တစ်ဆက်တှရေဲ့အဓိပ်ပာတကယ်ပဲလား?
သငျသညျဂယ်ရီ Wilson ကယုံကြည်လျှင်ကောင်းပြီဟုတ်တယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိအသစ်ကိုစာအုပ် Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် - မိမိအပေါ်တိုးချဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် TEDx ဟောပြောပွဲ အကြောင်းအရာပေါ် - ခေတ်သစ်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်းအရည်အသွေးကိုယခင်အစဉ်အဆက်ပဋိသန္ဓေယူကြဘယ်တော့မှနိုင်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေ၌အကြှနျုပျတို့၏ဦးနှောက် rewires ဘယ်လိုပြသထားတယ်။
စကော့တလန်အခြေစိုက်ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည့်ဝီလ်ဆင်သည်မိဘ၏ရှုထောင့်မှရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သူ၏တုန်လှုပ်စေသောသုတေသနသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြည့်ရှုသည့်အလေ့အထနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအတွက်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။
သူပြwhenနာရဲ့အတိုင်းအတာကိုသူကအရင်မြင်ခဲ့ ဇနီး၏အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးဖိုရမ် ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းသည်ဟုအမျိုးသားများကထင်မှတ်စေခဲ့သည်။ သို့သော်သူကသူသည်ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအစီအစဉ်မရှိကြောင်းအလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။ “ ငါဟာလူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသဘာဝအရသဘာဝတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပြောဖို့မကြိုးစားဘူး။ လိင်။ မင်းမှာပြaနာတစ်ခုရှိတယ်လို့မင်းမခံစားရဘူးဆိုရင်ငါမင်းနဲ့ငြင်းခုန်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
သို့သော်သူ၏အတွေ့အကြုံကိုယောက်ျား၏တိုးပွားလာနံပါတ်များဖြစ်ပါသည် do အဆိုပါအထူးသဖြင့်မြန်နှုန်းနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အဆုံးမဲ့အမျိုးမျိုးနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိရာပေါင်းများစွာသောသူတို့ကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏စိုးရိမ်စိတ်, obsessive အပြုအမူနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေညာဘက်ကိုနာတာရှည်စိတ်ကျရောဂါနှင့်သတ်သေအတှေးအမှတဆင့်အထိရောဂါလက္ခဏာတွေဖြေရှင်းရန်အမျိုးမျိုးသောအကူအညီနဲ့ဖိုရမ်များမှလှည့်။
ဒါဟာအားဖြင့် 2009 အတွက်တင်ပြကြောင်းကနေတစ်ဦးအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုဖွင့် ကနေဒါသုတေသနပညာရှင်သူ၏စမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်များညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးများဟာသူတို့ရဲ့အမြင်သို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြောင်းလဲပစ်မပေးဖူးစောင့်ကြည့်အခိုင်အမာ: 'တစျခုဘာသာရပ်တစ်ခုရောဂါဗေဒလိင်ခဲ့မ "ရှိမုနျကို Lajeunesse ကဆိုသည်။ "တကယ်တော့သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များအားလုံးအတော်လေးသမားရိုးကျကြတယ်။ " တစ်ခုကသိသာနိဂုံးချုပ် porn မှုမရှိခြင်းကိုသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တာပါပဲ။
အထူးသဖြင့် Lajeunesse အဖြစ် - သို့သော် Wilson ကသူကြားလက္ခဏာတွေမျိုးအကြောင်းကိုသေချာပေါက်သူတို့ရဲ့ porn အလေ့အထမှဘာသာရပ်များအားဖြင့်ချိတ်ဆက်မဟုတ်ကြောင်းထောက်ပြ နာမည်ကြီးကိုရှာဖွေရန်ပျက်ကွက် အဘယ်သူသည်ပင်တဦးတည်းနှစ်ဆယ်-တစ်ခုခုယောက်ျားသည် မ ထိုသို့သောအားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်လေ့လာမှုမဆိုထိန်းချုပ်အုပ်စုသည်ငြင်းပယ်, porn ကိုအသုံးပြုပါ။
ပွဲတစ်ပွဲသောအရာကိုဘဝကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ယောက်ျား၏တစ်ခုတည်းသောကြီးမားသောအုပ်စုတစ်စုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူ AND မရှိဘဲနှစ်ဦးစလုံးနှင့်တူ၏ယခု erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, desensitisation နှင့်စွဲဆက်စပ် obsessive အပြုအမူမျိုးကြုံနေရပြီးနောက်လုံးဝရှောင်ကြီးထွားလာနံပါတ်များကိုဖြစ်ကြသည်။ တခါမှာမကြာခဏအတော်ကြာ - Wilson ကရုတ်တရက်အမာခံညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအပိုင်းများကို၏အချိုးပြခန်းဝင်ရောက်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖန်ဆင်းပေးသော 2006 အတွက်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်များ၏လတ်တလောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသရုပ်ပြဖို့သူတို့ထဲကအတော်များများကိုးကား။
"ဒါဟာငါ့ကိုအဆက်မပြတ်ပိုပိုပြီးနှင့်အဆင့်မြင့် resolution ကိုအနည်းဆုံးစောင့်ကြည့်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ," တဦးတည်းစှဲလမျးသူဝန်ခံသည်။ "ဒါဟာတခါတရံအပေါ်အပြီးသတ်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေတစ်ခုလုံးတစ်နေ့ကိစ္စဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာဘယ်တော့မှအစဉ်ရဲ။ ဦးနှောက်ကိုအစဉ်အမြဲ ... ထိုကဲ့သို့သောမုသားပြောပါတယ် '' ကိုပိုမိုလိုအပ် '' ။ "
အဆိုပါပြဿနာ, Wilson ကကရှင်းပြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်ကသူတို့ရဲ့ဗီဇရေကူးကန်ကယျြဝနျးဆက်လက်ကူညီပေးခဲ့သည်ရာတစ်ခုချင်းစီကိုဝတ္ထု "အိမ်ထောင်ဖက်" ကျနော်တို့ကြုံတွေ့ရသည် "go-get-က" neurochemical dopamine လွှတ်ပေးရန်ကြိုးနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
သို့သော်အဆုံးမဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်း၏ယနေ့အင်တာနက်လွှမ်းမိုးနှငျ့ရငျဆိုငျကျွန်တော်တို့ရဲ့မုဆိုးစုဆောင်းနှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝကဆုလာဘ် circuitry ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သည်သော dopamine မူးရူးထုတ်လုပ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရုန်းကန်နှင့်အလှည့်အတွက် DeltaFosB တစ်တည်ဆောက်-Up ဖန်တီးပေးပါတယ်။
စစ်မှန်သောဘဝရိုးရှင်းစွာဆိုပိုပြီးဖြတ်မထားဘူးသည့်အခါ DeltaFosB အတွက်အားလုံးနီးပါးစွဲတွေ့ရသောထုံပျော်မွေ့တုံ့ပြန်မှုချိတ်ဆက်ဦးနှောက်ဓာတုဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ဆက်စပ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကို - ထိုညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူအဘို့အစဉ်အမြဲပိုပြီးအစွန်းရောက်ပုံများ, Wilson ကပြောပါတယ် arousal ဘို့လိုအပ်သည် "တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်း, voyeurism, နှိပ်ခြင်း, ရှာဖွေခြင်း, မျိုးစုံ tabs များမြန်ဆန်-forwarding ကို, စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်း, ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်အံ့သြစရာ။ "
ပိုးပန်း, ထိ, အနံ့, pheromones, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှု, အမှန်တကယ်လူ့အပြန်အလှန် - - စစ်မှန်သောလူ့ဇာတိ-and အသွေးသည်လိင်၏ဒြပ်စင်နဲ့နှိုငျးယှဉျက porn စွဲငရဲတစ်ဦးအထီးကျန်မျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါသည်ဘယ်လိုကြည့်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ အထူးသဖြင့်လျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးရဲ့မျိုးဆက်တူ, သငျသညျတခုအစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေချိတ်ဆက်တဲ့အန္တာရာယ်။
သို့သော် Wilson ကယင်းကိုခေါ်ထားပါတယ်သောအရာကိုထံမှသတင်းကောင်း "အမြန်ဆုံး-move အများစုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအစဉ်အဆက်မသိစိတ်ကောက်ယူ" မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ၏သက်ရောက်မှု Reversible လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရာနှင့်ချီသောအမျိုးသားများ (နှင့်အချို့အမျိုးသမီးများ) သည်ရှောင်ကြဉ်ရန်အားပေးသည့်အနေဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောမိမိကိုယ်ကိုကူညီသည့်ဖိုရမ်များသို့လည်ပတ်ကြသည်။ reboot Nation, Nofap.org နှင့် Wilson က၏ကိုယ်ပိုင်ရေပန်းစား site ကို), ပြန်လည်ထူထောင်စွဲပြန်လည်ထူထောင်ဘယ်မှာ (တစ်ခါတစ်ရံစိတ်ပျက်စရာလိင်စိတ်စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုပြီးနောက်) ဦး နှောက်မကြာမီ circuit ကိုပြန်လည်စတင်နှင့်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုပြန်လည်။
Wilson ကအသက်အရွယ် 20 ကတည်းကအမာခံ porn စှဲလမျးသူသူကသူ့နှောင်းပိုင်းတွင် 14s ၌လူကိုးကား: "ငါလုံးဝ2months ago ကတော့ဘူး။ ဒါဟာအလွန်ခက်ခဲပေမယ့်ယခုအထိကမယုံနိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးရှိလာခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ကျန်ရှိနေသေးသောဆေးဖြတ်ကတည်းကပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏စိုးရိမ်စိတ်လည်းမရှိခဲ့ချေသည်။ အကြှနျုပျ၏ memory နဲ့အာရုံစူးစိုက်သူတို့သည်အစဉ်ဖူးထက်ပြတ်သားဖြစ်ကြသည်။ ကြီးမားတဲ့ "ယင်းသံလိုက်" နှင့်ငါ၏အ ED (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု) လွန်းသွားပြီနဲ့တူငါခံစားရတယ်။ ငါအလေးအနက်ထားငါတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း, အသက်ရှင်ခြင်းမှာတစ်စက္ကန့်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ "
ဤသည်ညစ်ညမ်းစွဲ၏သက်ရောက်မှုသင်စတင်အစောပိုင်းပိုဆိုးဖြစ်ကြောင်းပေးထား, နှစ်ထပ်ကွမ်းအားရစရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငယ်ရွယ်ဆယ်ကျော်သက်သူတို့ကိုအရှိဆုံးအားနည်းချက်စေသည်သော dopamine ထုတ်လုပ်မှုနှင့် neuroplasticity သူတို့ရဲ့အထွတ်အထိပ်မှာ - ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတင်စရာအထောက်အထားကပိုရှည်ကြာပေမယ့်, သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်များလွန်းပါကထိုကဲ့သို့သောရှာပြောင်းလဲသည့်ဆုလာဘ်အတွက် "န်းကျင်ရှာနေပုံမှန် sensitivity ကိုပြန်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ အဖြစ်ဖော်ရွေအပြန်အလှန်နှင့်, သင်တန်း, အစစ်အမှန်အိမ်ထောင်ဖက်။ "
Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်, ပြီးနောက် အမည်တူ၏ကြာကြာ-ရပ်နေသည်ကိုက်ဘ်ဆိုက်, သိပ္ပံနည်းကျဒီအတော်လေးသစ်ကိုပြဿနာမီးမောင်းထိုးပြလေ့လာမှုများ, နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုအထင်ကြီးခင်းကျင်းနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောသို့ရာတွင်တစ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်အပေါ်တည်ဆောက်။
နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများဒီဂျစ်တယ်ခေတ် navigate ကိုကူညီပုံကိုသိခငျြတဲ့သူကိုသူတို့အား - ဒါဟာတစ်ဦး, riveting စိတ်ပျက်စရာပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာ porn အသုံးပြုမှုနှင့်အတူရုန်းကန်သောသူကိုမဆိုဘို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုအားပေးပါတယ်။
Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက် ဂယ်ရီ Wilson ကအားဖြင့်ဓနသဟာယထုတ်ဝေရေး, စျေးနှုန်း£ 9.99 နှင့်£ 3.48 စျေးနှုန်းတစ်ခု ebook အဖြစ်ယနေ့ထုတ်ဝေနေသည်။